Parudo: pakati pemanzwiro uye njere (koramu 22) - Rabbi Michael Avraham
PaRudo: Pakati Pemanzwire Nepfungwa (Koramu 22)
16 makomendi	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
Muchikamu cheTorah chevhiki ino (uye ndinokumbira) chikamu chokuti "Ude Ishe Mwari wako" chinowanikwa kubva mukudzokororwa kweShema, iyo inobata nemurairo wekuda Ishe. Pandakanzwa kudanwa nhasi, ndakarangarira dzimwe dzepfungwa dzandaive nadzo munguva yakapfuura pamusoro perudo muruzhinji, uye kunyanya rudo rwaMwari, uye ndine pfungwa shoma dzakarodzwa pamusoro padzo.
Pakati pemanzwiro uye pfungwa mune zvisarudzo
Pandakadzidzisa payeshiva muYeruham, pane vadzidzi vakandibvunza nezvekusarudza wokuroorana naye, kana kutevera manzwiro (mwoyo) kana kuti pfungwa. Ndakavapindura kuti mushure mepfungwa chete, asi kuti pfungwa dzinofanira kufungisisa izvo mwoyo unonzwa (kubatana kwemanzwiro, chemistry, pamwe chete nemumwe) sechimwe chezvikonzero muchisarudzo chayo. Sarudzo mumativi ose dzinofanira kuitwa mundangariro, uye basa romwoyo nderekuisa mifungo inoda kurangarirwa asi isingasarurwi. Pane zvikonzero zviviri zvinogoneka zveizvi: imwe ndeyehunyanzvi. Kutevera mwoyo kunogona kutungamirira kumigumisiro yakaipa. Manzwiro haasati ari iwo ega kana kuti anonyanya kukosha nguva dzose munhau yacho. Pfungwa dzakadzikama kupfuura mwoyo. Yechipiri yakakura. Paunopa matomu, haunyatso sarudza. Sarudzo netsanangudzo chiito chepfungwa (kana kuti: yekuzvidira), kwete yemanzwiro. Sarudzo inoitwa nekutonga kwekuziva, nepo manzwiro anozvigadzirira kwete kubva mukutonga kwangu. Kutaura zvazviri, kutevera mwoyo hakusi chisarudzo zvachose. Iko kusaita sarudzo asi kurega mamiriro ezvinhu achikwevera iwe shure kwavo chero kwazvingave.
Kusvika pari zvino fungidziro ndeyokuti nepo rudo rwuri nhau yomwoyo, kusarudza wokuroorana naye haisi nyaya yorudo chete. Sezvambotaurwa, manzwiro anongova chimwe chezvikonzero. Asi ndinofunga kuti handiwo mufananidzo wose. Kunyange rudo pacharwo haisi manzwiro chete, uye zvichida haisi kunyange chinhu chikuru mairi.
Apo Jakobho akashandira Rakeri kwamakore manomwe, rugwaro runoti, “Pameso pake pachava namazuva mashoma pakumuda kwake” ( Genesi XNUMX:XNUMX ). Mubvunzo unozivikanwa kuti tsananguro iyi inoita seyakapesana nechiitiko chedu. Kazhinji kana munhu achida mumwe munhu kana chimwe chinhu uye achifanira kumumirira, zuva rega rega rinoratidzika kwaari sekusingaperi. Nepo pano vhesi yacho ichiti makore ake manomwe ebasa aiita semazuva mashoma kwaari. Izvo zvakapesana neruzivo rwedu. Zvinowanzotsanangurwa kuti izvi imhaka yokuti Jakobho aida Rakeri kwete iye pachake. Munhu anoda chimwe chinhu kana mumwe munhu uye anozvida iye pachake anotozviisa pakati. Kufarira kwake ndiko kunoda kuzadzikiswa, saka zvakamuomera kumirira kusvika ahwina. Anozvida iye kwete mumwe wake. Asi kana murume achida mumwe wake uye zviito zvake zvinoitirwa iye uye kwete kwaari, saka kunyange makore ekushanda anoita seari mutengo muduku kwaari.
Don Yehuda Abarbanel mubhuku rake Conversations on Love, pamwe chete nemuzivi weSpain, wezvematongerwo enyika uye mutori wenhau Jose Ortega i Gast, mubhuku rake Five Essays on Love, anosiyanisa pakati perudo uye ruchiva. Ose ari maviri anotsanangura kuti rudo ipfungwa yepakati, zvichireva kuti museve warwo wesimba wakatarisana nemunhu kunze. Nepo ruchiva rwuri manyawi epakati, kureva kuti, museve wesimba unotendeuka kubva kunze uchienda kwauri, mukati. Murudo uyo ari pakati ndiye mudikanwi, nepo muruchiva ari pakati ndiye mudiwa (kana ruchiva, kana ruchiva). Anoda kukunda kana kuzviwanira mudiwa. Nezveizvi mascouts edu atotaura (uko, uko): Muredzi anoda hove? Ehe. Saka nei ari kuvadya?!
Mumashoko aya zvinogona kunzi Jakobho aida Rakeri uye akanga asingachiva Rakeri. Ruchiva rune zvinhu, zvichireva kuti ruchiva runoda kuisa kwaari chimwe chinhu chaanoshuva, saka haakwanisi kumirira kuti zvitoitika. Zuva rimwe nerimwe rinoita sekusingaperi kwaari. Asi mudiwa anoda kupa mumwe (mudiwa), saka hazvimutambudzi kushanda kwemakore kana zviri izvo zvinodiwa kuti zviitike.
Zvichida imwe chiyero inogona kuwedzerwa kune iyi musiyano. Dimikira rengano rekumutsa rudo muchinjiko weCupid wakanamira mumoyo wemudiwa. Dimikira iri rinotaura nezverudo semanzwiro anobuda mumwoyo memudiwa nekuda kwechimwe chinhu chekunze. Ichi hachisi chisarudzo chake kana kutonga kwake. Asi tsananguro iyi inonyanya kukodzera kuchiva pane rudo. Murudo mune chimwe chinhu chakakura uye chisingatarisirwi. Kunyange kana ichiita seinomuka kubva pachayo isina mitemo nemitemo uye pasina kungwara, inogona kunge iri kungwara kwakadzikama, kana mhedzisiro yebasa repfungwa neremweya rakatangira nguva yekumuka kwayo. Pfungwa dzakavakwa neni dzinomutswa nekuda kwemaumbirwo andakaita. Saka murudo, kusiyana neruchiva, pane chidimbu cheungwaru uye chishuwo uye kwete chete manzwiro anongomuka akazvimirira kunze kwangu.
Rudo rwaMwari: manzwiro uye njere
Maimonides anobata norudo rwaMwari munzvimbo mbiri mubhuku rake. Mumitemo yekutanga yeTorah anokurukura nezvemitemo yerudo rwaMwari uye zvese zvinobva kwavari, uye zvakare mumitemo yekupfidza anoidzokorora muchidimbu (sezvimwe mune dzimwe misoro inodzokororwa mumitemo yekutendeuka zvakare). Pakutanga kwechitsauko chegumi cheTeshuvah, anobata nebasa raIshe rezita rake, uye pakati pezvimwe zvinhu anonyora:
A. Ngakurege kuva nemunhu anoti ndinoita mirairo yeTorah uye ndinobata nehuchenjeri hwayo kuti ndiwane maropafadzo ese akanyorwa mairi kana kuti ndive nehupenyu hwepasi rinotevera, uye ndosiya kudarika izvo Torah yakayambira. vachipikisa kuti Uyu, anoshanda nenzira iyi mushandi wekutya uye kwete kunaka kwevaporofita uye kwete kunaka kwevachenjeri, uye Mwari haashande nenzira iyi asi vanhu venyika nevakadzi nevaduku. avo vanovadzidzisa kushanda nekutya kusvikira vawanda uye vashanda nerudo.
B. Mushandi werudo anobata neTorah naMatzah uye anofamba munzira dzenjere kwete chero chinhu chiri munyika uye kwete nekutya zvakaipa uye kusagara nhaka yezvakanaka asi anoita chokwadi nekuti ichokwadi uye magumo ezvakanaka zvinouya nekuti. yazvo, uye hunhu uhwu hunhu hukuru kwazvo Akadiwa maererano nekushanda kwaakaita asi kwete nekuda kwerudo uye ndiko kunaka kwaakadanwa naMuropafadzwa naMosesi kuti zvakanzi ukada Jehovha Mwari wako. uye nepo murume achida Ishe rudo rwakafanira ruchaita pakarepo matzahs ​​kubva murudo.
Maimonides mumashoko ake pano anozivisa pakati pebasa raMwari nezita raro (ndiko kuti kwete nokuda kwefariro ipi neipi yokunze) norudo nokuda kwake. Uyezve, muHalacha B anotsanangura rudo rwaMwari sokuita chokwadi nokuti ichokwadi uye kwete nokuda kwechimwe chikonzero. Iyi itsanangudzo yehuzivi uye inotonhora, uye kunyange kutsausa. Hapana chimiro chepfungwa pano. Rudo rwaMwari nderokuita chokwadi nokuti ndiye chokwadi, uye ndizvo zvazviri. Ndicho chikonzero nei Maimonides achinyora kuti urwu rudo runako rwevakachenjera (uye kwete mirangariro). Izvi ndizvo dzimwe nguva zvinonzi "rudo rwaMwari rwepfungwa."
Uye pano, pakarepo mune inotevera halakhah anonyora zvakapesana zvakakwana:
chetatu. Uye rudo rwakafanira rwakadini nderwekuti achada Mwari rudo rwakadzama uye rwakadzama kusvikira mweya wake wasungwa nerudo rwaMwari uye unogara uchikanganisa mazviri semurwere werudo ane pfungwa dzisina kusununguka kubva murudo rwa Mwari. mukadzi iyeye uye anogara achikanganisa pazviri Mugovera Kubva uku kuchava rudo rwaMwari mumwoyo yevadikani vake vanogara vachikanganisa mazviri sezvavakarayirwa nemwoyo wako wose uye nemweya wako wose, uye ndizvo Soromoni akati mufananidzo wekuti ndinorwara nerudo, uye rwiyo rwese rwemifananidzo rwunoitirwa izvi.
Apa rudo rwuri kupisa nemoyo sekuda kwemurume kumukadzi. Sezvakatsanangurwa mumanovhero akanakisa, uye kunyanya muRwiyo Rwenziyo. Mudiwa anorwara nerudo uye anogara achikanganisa mazviri. Haana kukwanisa kumuvhiringa chero nguva.
Zvese izvi zvineichei nemufananidzo unotonhora wenjere unotsanangurwa mu halakhah yapfuura? Maimonides akavhiringidzika here, kana kuti akakanganwa zvaakanyora ipapo? Ndichacherechedza kuti uku hakusi kupokanidzana kwatakawana pakati penzvimbo mbiri dzakasiyana mumanyoro ake, kana kuti pakati paMaimonides nezvinotaurwa muTalmud. Pane mitemo miviri yepedyo uye inoteedzana pano inotaura mitauro yakasiyana zvachose kubva kune mumwe.
Ini ndinofunga munhu anofanirwa kungwarira pano nezvekukundikana kwepurofiti mukuzadzisa decoding. Paunounza mufananidzo kuti uratidze chimwe chinhu, mufananidzo wacho une zvakawanda uye hazvisi zvese zvinoenderana neshoko nemufananidzo. Munhu anofanirwa kutsvaga pfundo guru iro mufananidzo wakauya kuzodzidzisa, uye kwete kutora zvakatetepa mamwe mamwe emamwe mauri. Ini ndinofunga kuti mufananidzo uri muHalacha XNUMX unosvika pakutaura kuti kunyangwe rudo rwaMwari rwuri rwepfungwa uye rusiri rwepfungwa, runofanira kugara rwakakanganisika uye rusingatsauswi kubva pamoyo. Mufananidzo wacho unouya kuzodzidzisa kugara kwerudo semurudo rwemurume kumukadzi, asi kwete hazvo chimiro chepfungwa cherudo rwerudo.
Muenzaniso wekutendeuka, kuyananiswa uye ruregerero
Ndichadzoka kwechinguvana zvakare kunguva yekufara yeJeruhamu. Ndiri ikoko, ndakasvikwa nechikoro chepamusoro chemhoteredzo muSde Boker ndokukumbirwa kutaura kuvadzidzi navashandi mukati meMazuva Gumi okupfidza paKuyananisa, Kukanganwira uye Kukanganwira, asi kwete mumugariro worudzidziso. Ndakatanga kutaura zvangu nemubvunzo wandakavabvunza. Ngatitii Reuben anorova Simoni uye hana yake inorova, saka ofunga kuenda kunomunyaradza. Anokumbira ruregerero kubva pasi pemoyo wake achimuteterera kuti amuregerere. Levy, kune rumwe rutivi, akarovawo Shimon (Shimon zvimwe akanga ari mukomana mukuru wekirasi), uye haana kuzvidemba nokuda kwaikoku. Mwoyo wake haumutambudzi, haana manzwiro akapoteredza nyaya yacho. Chokwadi haana basa nazvo. Kunyange zvakadaro, anoona kuti akaita chinhu chakaipa uye akarwadzisa Shimoni, saka iyewo anosarudza kuenda kunomukumbira ruregerero. Ngirozi Gabrieri inosvika pana Simoni ane rombo rakanaka yomuzivisa zvakadzama zvaiva mumwoyo maRubheni naRevhi, kana kuti zvimwe Simoni pachake anonzwisisa kuti izvi ndizvo zviri kuitika mumwoyo maRubheni naRevhi mukati. Anofanira kuitei? Unobvuma here ruregerero rwaRuben? Uye zvakadini nechikumbiro chaLevy? Ndechipi chezvikumbiro chakanyanya kufanira kukanganwirwa?
Nenzira isingashamisi, kuita kwevateereri kwakanga kunowirirana zvikuru. Chikumbiro chaReuven ndechechokwadi uye chakakodzera kukanganwirwa, zvisinei kuti Levy ane hunyengeri uye hapana chikonzero chekumuregerera. Ukuwo, ndakapikisa kuti mumaonero angu mamiriro acho ezvinhu akasiyana chaizvo. Kukumbira ruregerero kwaRubheni kune chinangwa chokudyisa kurwadza kwehana yake. Anozvishandira pachake (centrifugally), nekuda kwake (kunyaradza kurwadza kwemudumbu uye kurwadza kwehana). Levy, kune rumwe rutivi, anoita chiito chakachena zvinoshamisa. Kunyange zvazvo asina kurwadziwa nemudumbu kana mumwoyo, anoona kuti pane chaatadza uye kuti ibasa rake kunyaradza Simon akuvara, saka anoita zvinodiwa kwaari uye anokumbira ruregerero. Ichi chiito checentrifugal, sezvachinoitwa kune akabatwa uye kwete iye pachake.
Kunyange zvazvo mumoyo make Levy asinganzwi chinhu, asi nei zvakakosha? Yakangovakwa zvakasiyana kubva kuna Reuben. Amygdala yake (iyo inokonzera kunzwira tsitsi) yakakuvadzwa uye naizvozvo nzvimbo yake yemanzwiro haisi kushanda zvakanaka. Saka manje?! Uye kuti chimiro chomuzvarirwo chemunhu chinofanira kutora chikamu mukuremekedzwa kwedu kwetsika kwaari? Mukupesana, ndiko kukuvadzwa uku ndiko kunomubvumira kuita nenzira yakachena, isina udyire uye yakakwana, nokuda kwaShimoni chete, uye naizvozvo anofanira kukanganwirwa.
Kubva pane imwe kona zvinogona kutaurwa kuti Reuben ari kuita zvekunzwa, uku Levy ari kuita chiito kubva mukutonga kwake uye kutonga kwake. Kuonga kwetsika kunouya kumunhu nokuda kwezvisarudzo zvake uye kwete nokuda kwemanzwiro nemasikirwo anomuka kana kuti asingamuki maari.
Emotion sechikonzero kana somugumisiro
Handirevi kutaura kuti mhosva kana kuzvidemba zvinotoramba hunhu hwechiito kana hwemunhu. Kana Revi achifadza Shimon nokuda kwezvikonzero zvakanaka (centrifugal), asi panguva imwe chete ane kunzwa ane mhosva zvichitevera kukuvadzwa kwaakaita paari, chiito chacho chakakwana uye chakachena chose. Chero bedzi chikonzero chaanoita hakusi manzwiro, ndiko kuti, kuvhara moto mukati make, asi kuunza kuporesa kuna Simoni anotambudzika. Kuvapo kwemanzwiro, kana isiri iyo chikonzero chechiito chekuyananisa, haifaniri kupindira nekuongorora tsika uye kugamuchirwa kwechikumbiro chekuregererwa. Munhuwo zvake ane manzwiro akadaro (amygdala ndiye ane mhosva), angave achida kana kuti kwete. Saka zviri pachena kuti hazvidziviriri kugamuchirwa kwechikumbiro. Asi chaizvo nekuda kweizvi manzwiro aya haanawo kukosha pano, nekuti anomuka asingateveri sarudzo yangu asi pachayo (irwo rudzi rwepfungwa). Chimiro chendangariro hachiratidzi kuvimbika kwetsika kana kuti kusavapo. Tsika dzedu dzinosarudzwa nezvisarudzo zvatinoita uye kwete nemirangariro kana kuti mirangariro inomuka matiri isingadzoreki. Chimiro chepfungwa hachipindire asi nokuda kwechikonzero chimwe chete icho hachina kukosha pakutenda kwetsika. Kuvapo kwemirangariro kunofanira kuva kusina kwayakarerekera mugadziriro yokutonga kwetsika.
Kana manzwiro akagadzirwa semugumisiro wekunzwisisa kwekuziva kwehutsika hunonetsa muchiito, saka chiratidzo chehunhu hwaReuben. Asi zvakare, Levy uyo anotambudzwa neamygdala uye naizvozvo haana kukudziridza manzwiro akadaro, akaita chisarudzo chakanaka chetsika, uye naizvozvo haakodzeri kurumbidzwa kwetsika uye kuonga kubva kuna Rubheni. Musiyano uripo pakati pake naRubheni unongova muchimiro chehuropi hwavo uye kwete mukutonga kwavo kwetsika nechisarudzo. Sezvakataurwa, chimiro chepfungwa ichokwadi chisina kwachakarerekera uye hachina chekuita nekuonga kwehunhu kwemunhu.
Saizvozvowo, munyori weBeading Dew anonyora musumo yake mutsamba C:
Uye kubva pane zvandakataura mairi, rangarira zvandakanzwa vamwe vanhu vachitaura kubva munzira yepfungwa maererano nekudzidza kweTorah yedu tsvene, uye vakati mudzidzi anovandudza hutsva uye anofara uye anofarira kudzidza kwake, haasi kudzidza Torah. , Asi uyo anodzidza uye anofarira kudzidza kwake, anopindira mukudzidza kwake pamwe chete nemafaro pachawo.
Uye chaizvoizvo kukanganisa kwakakurumbira. Mukupesana, nokuti ichi ndicho musimboti wemurairo wokudzidza Torah, kuva vatanhatu uye kufara uye kufara mukudzidza kwake, uye ipapo mashoko eTorah anomedzwa muropa rake. Uye sezvo aifarikanya mashoko eTorah, akanamatira kuTorah [uye ona tsinhiro yeRashi Sanhedrin Noah. D.H. uye glue].
Avo "vasina kururama" vanofunga kuti ani naani anofara uye anonakidzwa nekudzidza, izvi zvinokuvadza kukosha kwechitendero chekudzidza kwake, sezvo zvichiitwa nekuda kwekunakidzwa uye kwete nekuda kwedenga (= nekuda kwaro). Asi uku kukanganisa. Mufaro uye mafaro hazvibvisi kukosha kwechitendero chechiito.
Asi iri ndiro divi rimwe chete remari. Anobva awedzera rimwe divi rake:
Uye Modina, kuti mudzidzi haasi wekuitira mitzvah yekudzidza, chete nekuti anofarira kudzidza kwake, nekuti kunonzi kudzidza kwete nekuda kwayo, sezvo achidya matzah kwete nekuda kwe mitzvah chete. nekuda kwekudya mafaro; Ivo ndokuti: Haangatongopindi kune chimwe chinhu kunze kwezita rake raanopenga. Asi anodzidza pamusana pemitzvah uye anonakidzwa nekudzidza kwake, nokuti chidzidzo chezita racho, uye rose rinoera, nokuti rufaro mitzvah zvakare.
Ndiko kuti, mufaro uye mafaro hazvibvisi kukosha kwechiito chero bedzi ivo vakabatanidzwa pairi semugumisiro wepadivi. Asi kana munhu akadzidzira mafaro uye mufaro, i.e. izvo zvinokurudzira pakudzidza kwake, iko kudzidza zvechokwadi kwete nekuda kwayo. Apa vaive vakarurama "vakashata." Muchirevo chedu chemashoko zvinonzi kukanganisa kwavo hakusi pakufunga kuti chidzidzo hachifanirwe kuitwa nenzira yecentrifugal. Mukupesana, ivo vakarurama chose chose. Chikanganiso chavo ndechekuti kuvapo kwekunakidzwa uye mufaro kunoratidza mumaonero avo kuti ichi chiitiko checentrifugal. Hazvidi hazvo. Dzimwe nguva mafaro nerufaro manzwiro anouya chete semugumisiro wekudzidza uye asingaumbe zvikonzero nazvo.
Kudzokera kurudo rwaMwari
Mhedziso inobuda kubva kune zvinhu kusvika ikozvino ndeyokuti mufananidzo wandakatsanangura pakutanga hauna kukwana, uye mamiriro acho akaoma. Ndakasiyanisa rudo (centrifugal) neruchiva (centrifugal). Ipapo ndakasiyanisa rudo rwepfungwa nerwepfungwa, uye takaona kuti Maimonides anoda rudo rwepfungwa-rwepfungwa panzvimbo pepfungwa. Tsananguro iri mundima yekupedzisira inogona kutsanangura chikonzero nei.
Kana rudo rwuine manzwiro, kazhinji rune centripetal dimension kwarwo. Kana ndikanzwa manzwiro akasimba erudo rwepfungwa kune mumwe munhu, ipapo zviito zvandinoita kuti ndikuhwine zvine chimiro chinondifadza. Ndinotsigira manzwiro angu uye ndinoda kuzadza kushayikwa kwemanzwiro kwandinonzwa chero bedzi ndisina kuiwana. Kunyangwe rwuri rudo kwete ruchiva, chero rune hunhu hwepfungwa hunosanganisira mativi maviri echiito. Handishandiri vanodiwa kana vadikanwa bedzi, asi neniwo. Mukupesana, rudo rwepfungwa rwakachena rusina humiro hwemanzwiro, irwo netsanangudzo chinhu chakachena checentrifugal. Ini handina kushaya uye handidzivise manzwiro mukati mangu kuti ndinofanira kuvatsigira, asi shanda chete nekuda kwevanoda. Naizvozvo rudo rwakachena rudo rwepfungwa, rweplatonic. Kana manzwiro akagadzirwa semugumisiro, angasakuvadza, asi chero bedzi ari mugumisiro uye kwete chikamu chechikonzero uye kukurudzira kwezviito zvangu.
Izvi zvinogona kutsanangura mubvunzo wekuti tingaraira sei rudo rwaMwari, uye rudo zvachose (kunewo murairo wekuda kufara uye rudo rwemutorwa). Kana rudo rwuri manzwiro anobva angomuka zvega izvo hazvisi kwandiri. Saka murayiro wekuda unorevei? Asi kana rudo rwuri muuyo wechisarudzo chendangariro uye kwete mirangarirowo zvayo, ipapo pane nzvimbo yokurubatanidza.
Muchirevo chechinyorwa chino inongori tsinhiro yekuti zvinogona kuratidzwa kuti mirairo yese inobata nemanzwiro akaita serudo neruvengo haitendeukiri kumanzwiro asi kuhungwaru hwedu.  Semuenzaniso, R. Yitzchak Hutner anounza mubvunzo wakabvunzwa kwaari kuti Maimonides anonyora sei murairo wekuda Hagari muchikwata chedu, sezvo wakabatanidzwa mumurairo wekuda rudo. Hagari muJudha uye saizvozvo anofanira kudiwa nokuti muJudha, saka murayiro wokuda Hagari unowedzera chii? Naizvozvo, kana ndichida mutorwa nokuti ari muJudha sezvandinoda muJudha mumwe nomumwe, handina kuchengeta murayiro wokuti ndide mutorwa. Naizvozvo, inotsanangura RIA, hapana kudzokororwa pano, uye imwe neimwe mitzvah ine zvayo zvayo uye chimiro chekuvapo.
Izvi zvinoreva kuti murairo wekuda Hagari ndewenjere kwete zvepfungwa. Zvinobatanidza chisarudzo changu chokumuda nokuda kwechikonzero chakati neicho. Urwu harusati rwuri rudo runofanira kuroverera mandiri nenzira yomuzvarirwo yarwo. Hapana chechikwata pane izvi, sezvo mitzvos ichikwezva kune zvisarudzo zvedu uye kwete kumanzwiro edu.
Mharidzo yevachenjeri pamusoro perudo rwecheers inoronga muunganidzwa wezviito zvatinofanira kuita. Uye iyi ndiyo nzira iyo Maimonides anoiisa nayo mumavambo endima yechina yaShe, asi:
Mitzvah akaita zvemashoko avo ekushanyira vanorwara, nekunyaradza vanochema, nekuburitsa vakafa, nekuunza mwenga, nekuperekedza vakakokwa, nekuita nezvese zvinodikanwa zvekuvigwa, kutakura pamapfudzi, uye lilac pamberi pake uye. chema uye uche uye uvige, uye ufare mwenga nechikomba, Shiur, kunyange matzahs ​​ose aya ari kubva pamashoko avo ivo vari muhuwandu uye vanoda muvakidzani wako sezvaunozvida iwe, zvinhu zvose zvaunoda kuti vamwe vakuitire iwe, wakaita. ivo hama yenyu muMurayiro napaMazaha.
Zvakare zvinoita sekuti mitzvah yerudo rwerudo haisi yemanzwiro asi nezvezviito.
Izvi zvakare zviri pachena kubva mundima iri muparsha yedu inoti:
Mushure mezvose, uye zvakare, uye zvakadaro zvakadaro,
Rudo runoturikira kuita chiito. Uye ndozvinoitawo ndima dziri muParashat Akev (inonzi vhiki rinouya. Dhuteronomi XNUMX:XNUMX):
Unofanira kuda Mwari waMwari wako, nokuchengeta mazuva ose zvaakatema, zvaakatema, nezvaakatonga, nezvaakatonga;
Zvakare, Vachenjeri vanodawo mavhesi ari muparsha yedu pane zvinobatika (Brachot SA AB):
Uye munzvimbo dzose - Tanya, R. Eliezer anoti, kana zvichinzi mumweya wako kuti sei zvichinzi munyika yako yose, uye kana zvichinzi munyika yako yose kuti sei zvichinzi mumweya wako wose, kunze kwekuti iwe munhu ane muviri waanoda kwaari , Kune izvi zvinotaurwa mumadad ese.
Rudo runofadza chinhu here kana kuti mazita acho?
Mumabhuku engoro mbiri nebharumu pagedhi rechipiri ndakasiyanisa chinhu nemaitiro acho kana mazita. Tafura iri pamberi pangu ine zvinhu zvakawanda: yakagadzirwa nematanda, ine makumbo mana, yakareba, yakagadzikana, yakasvibirira, yakatenderera uye nezvimwe nezvimwe zvakawanda. Asi tafura pachayo chii? Vamwe vangati tafura haisi chinhu kunze kwekuunganidzwa kwezvimiro (izvi zvimwe ndizvo zvinotorwa nemuzivi Leibniz). Mubhuku rangu imomo ndakapikisa kuti ichi hachisi chokwadi. Tafura chimwe chinhu kunze kwekuunganidzwa kwezvinhu. Zvakarurama kutaura kuti ane unhu hwacho. Hunhu uhu ndihwo hunhu hwake 
Kana chinhu chaive chiri chinhu kunze kwekuunganidzwa kwezvivakwa, saka pakanga pasina chaimutadzisa kugadzira chinhu kubva muunganidzwa wezvinhu.  Semuenzaniso, muriwo wedombo rejade pachigunwe chemumwe munhu ane sikweya yetafura padivi pangu uye mhepo yemakore cumulonimbus pamusoro pedu ichavawo chinhu chiri pamutemo. Kuregererei? Nekuti hapana chinhu chine zvimiro zvese izvi. Ndezvezvinhu zvakasiyana. Asi kana chinhu chisiri chinhu kunze kwekuunganidzwa kwezvinhu, saka hazvibviri kutaura kudaro. Mhedziso ndeyokuti chinhu hachisi muunganidzwa wezvinhu. Pane muunganidzwa wezvimiro zvinoiratidzira.
Zvinenge zvese zvinotaurwa pamusoro pechinhu, chakadai setafura, chinoumba chirevo pamusoro pezvinhu zvacho. Kana tichiti ishava kana huni kana kureba kana kugadzikana, aya ndiwo maitiro ayo. Zvinoitawo here kuti zvirevo zvibatane netafura pachayo (mapfupa ayo)? Ndinofunga kuti pane mashoko akadaro. Semuenzaniso, chirevo chekuti tafura iripo. Kuvepo hachisi chinhu chetafura asi nharo pamusoro petafura pachayo.  Muchokwadi, kutaura kwangu kubva kumusoro kuti kune chinhu chakadai setafura kunze kweiyo seti yezvimiro chirevo chekuti tafura iripo, uye zviri pachena kuti inobata nayo uye kwete chete nemaitiro ayo. Ndinofunga kuti kunyange chirevo chokuti tafura chinhu chimwe uye kwete maviri chirevo pamusoro payo uye kwete tsanangudzo kana chimiro chayo.
Pandakabata nemusiyano uyu makore apfuura mumwe wevadzidzi vangu akataura kuti mukuona kwake kuda mumwe munhu kunotendeukira kumapfupa emudiwa kwete kuhunhu hwake. Hunhu ndiyo nzira yekusangana naye, asi ipapo rudo rwunotendeukira kune ane hunhu uye kwete kune hunhu, saka rinogona kurarama kunyangwe hunhu hukachinja neimwe nzira. Zvichida izvi ndizvo zvakataurwa nevachenjeri muPirkei Avot: Uye rudo rwese rusingatsamiri pane chero chinhu - bvisa chinhu uye bvisa rudo. "
Imwe tsananguro yekurambidzwa kwebasa rekunze
Mufananidzo uyu unogona kujekesazve kurambidzwa kushanda kune dzimwe nyika. Muparsha yedu (uye ini ndichakumbira) Torah inorebesa kurambidzwa kwebasa rekunze. Iyo Haftarah (Isaya chitsauko M) zvakare iine divi rayo rakapesana, kusazadzikiswa kwaMwari:
Nhmo Nhmo Ami Iamr Gd wako: Dbro pamusoro pemoyo Iroslm naKrao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole muverengi murenje Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Gia Mount Insa uye Clh naHih Hakb Lmisor naHrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Nadshading kumuuraya muimba yekurara Irah Bzrao Ikbtz Tlaim and Bhiko Isa Alot Inhl: S. Who Mdd Bsalo water and Smim Bzrt Tcn and Cl Bsls Afr earth and Skl Bfls Hrim and Gbaot Bmaznim: Who Tcn At wind Ikok naAis Atzto Ilmodiano: Ndiani Noatz naIbinho Barho naIbinho Msft naIlmdho uchenjeri uye Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli naCshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: uye Lbnon hakuna Di Bar uye Hito hakuna Di Aolh: S Cl Hgoim Kaini Ngdo Mafs naTho Nhsbo kwaari: uye Al Who Tdmion mwari uye Mh Dmot Tarco kwaari: Hfsl Nsc mhizha uye Tzrf Bzhb Irkano uye Rtkot mupfuri wegoridhe wesirivha: Hmscn Nguva huru yekuenda kupasi Th Cdk heaven and Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: anger Bl Ntao anger Bl Zrao anger Bl Srs Bartz Gzam Same to Nsf Bhm and Ibso and Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni and Asoh Sao Iamr peak holy: Aicm naRao Who Bra Ava ndivo maHmotzia Pakuwanda kwehondo yavo kuna vose muzita raJehovha achadana vazhinji vavo uye achashinga simba romunhu hapana asipo.
Chitsauko ichi chinobata nenyaya yekuti Gd haana mufananidzo wemuviri. Hazvibviri kumugadziridza chimiro tomuenzanisa nechimwe chinhu chatinoziva. Saka uchiri kumubata sei? Unozviwana sei kana kuziva kuti zviripo? Mavhesi ari pano anopindura izvi: nenjere chete. Tinoona zviito zvake uye kubva pazviri tinogumisa kuti ariko uye kuti ane simba. Anogadzira masangano enyika (akasika nyika) uye anogara padenderedzwa renyika (anoifambisa). Tarirai, ndiani akasika avo vanopedza kuwanda kwehondo yavo vose nezita raYikra.
Maererano nechikamu chapfuura zvinogona kunzi Gd haana chimiro, kureva kuti, haana hunhu hunoonekwa nesu. Isu hatizvione uye hationi chero ruzivo rwekunzwa maererano nazvo. Tinogona kutora mhedziso kubva pazviito zvayo (muchirevo chehuzivi hunopindira, ine mazita ekuita uye kwete mazita ezvinyorwa).
Rudo rwepfungwa runogona kuumbwa kune chinhu chinotengeswa kwatiri zvakananga, chatinoona kana chiitiko. Mushure mechiitiko uye kusangana kwakananga kwekunzwa, rudo runomuka runogona kutendeukira kumapfupa, asi izvi zvinoda kupindirana kwemazita uye maitiro evanoda. Kuburikidza navo tinosangana naye. Saka zvakaoma kupikisa kuti kune rudo rwepfungwa kune chimwe chinhu chatinosvika chete kuburikidza nenharo uye nenjere yekufungidzira chete, uye isu hatina nzira yekuona nayo yakananga kuonana nayo. Ndinofunga kuti nzira yerudo rwepfungwa yakazarurirwa kwatiri pano kunyanya.
Kana zvakadaro, hazvishamisi kuti parsha nehaftarah zvinobata nekubvisa kwaMwari, kana muparadzi akaunza murairo wekumuda. Kana tichiisa mukati mekutora kwaMwari, mhedziso iri pachena ndeyokuti rudo kwaari runofanira uye runogona chete kuva pamwero wenjere uye kwete pamwero wemanzwiro. Sezvakataurwa, izvi hazvisi zvisizvo sezvo sezvataona irwo rudo rwakachena uye rwakakwana pane ese. Zvinogoneka kuti rudo urwu ruchaitawo kunzwa kwerudo kwaari, asi ichi chinenge chiri apendikisi. Chikamu chisingabatike cherudo rwepfungwa dzaMwari. Manzwiro akadai haakwanisi kuva iwo ekutanga mavambo sezvo asina chekubatirira pachiri. Sezvandambotaura, manzwiro erudo anonzwisiswa mumufananidzo weanodiwa, uye haapo muna Mwari.
Zvichida imwe chiyero inogona kuonekwa pano mukurambidzwa kwebasa rekunze. Kana munhu akagadzira chimiro kuna Mwari, achiedza kuchishandura kuita chinhu chinoonekwa icho munhu anogona kuita hukama hwakananga hwekuziva, ipapo rudo kwaari runogona kuita manzwiro, uyo ane centripetal hunhu hunoisa mudiwa uye kwete mudikani. pakati. Gd naizvozvo anorayira mu haftarah yedu kuti tiise mukati kuti hapana nzira yekuitevedzera (kuigadzira kuva chero chimiro), uye nzira yekusvika nayo ndeyehuzivi-hungwaru, kuburikidza nekufungidzira. Nokudaro, rudo kwaari, iyo nyaya inobata nayo, ichavawo nechimiro chakadaro.
Ndinofunga kuti kune mashoma mashoma ebasa rekunze mune zvechitendero maonero evazhinji vedu. Vanhu vanofunga kuti basa rechitendero rinotonhora harina kunaka, asi pano ndakaedza kuratidza kuti rine chiyero chakakwana uye chakachena. Rudo rwepamoyo runowanzo kunamatira kune imwe chimiro chaMwari, saka inogona kutambura kubva kune yayo yekune dzimwe nyika yekunamatira zvinhu. Ndakaedza kupokana pano ndichifarira thesis yekuti rudo rwaMwari runofanira kunge rwuri rweplatonic, hungwaru uye nemoyo wakaparadzaniswa.
 Ichokwadi kuti kana Levy's amygdala ikakuvadzwa, zvichava zvakaoma, uye zvichida zvisingaiti, kuti anzwisise zvaakaita. Haanzwisise kuti kukuvara mupfungwa chii uye kuti sei kuchirwadzisa Simon. Nokudaro kukuvadzwa kune amygdala kungasamubvumira kuti anzwisise zvinoreva chiito chake, uye haazofungi kuti anofanira kukumbira ruregerero. Asi zvakakosha kunzwisisa kuti iyi ibasa rakasiyana reamygdala, iyo isinganyanyi kukosha munyaya yedu. Kupokana kwangu ndekwekuti kana achinzwisisa kuti akarwadzisa Simon kunyangwe zvikasamutambudza, chikumbiro chekuregererwa chakakwana uye chakachena. Manzwiro ake haana kunyanya kukosha. Ichokwadi kuti zvehunyanzvi pasina manzwiro akadaro anogona kunge asina kuzviita nekuti angadai asina kunzwisisa kukomba kwechiito uye zvachinoreva. Asi iyi inyaya yehunyanzvi. Zvinogona kunge zvine chekuita nekuvhura kwangu kuti ipfungwa inoita sarudzo, uye zvinotora manzwiro sechimwe chezvinhu zvinofanirwa kutariswa.
Zvinondiyeuchidza nezvehurukuro yandakambonzwa kuTED kubva kuna chiremba wetsinga aive akakuvadzwa uropi uye asingakwanisi kunzwa manzwiro. Akadzidza kutevedzera izvi zviito zvepfungwa nehunyanzvi. SaJohn Nash (anozivikanwa nebhuku raSylvia Nasser, Wonders of Reason, uye firimu rakatevera), uyo akawana mhoteredzo yokufungidzira yomunhu ndokudzidza kuifuratira nenzira younyanzvi chose chose. Akapwiswa kuti chaizvoizvo kwakanga kune vanhu vakamupoteredza, asi akadzidza kuti idzi dzakanga dziri nyengedzo uye aifanira kuzvifuratira kunyange zvazvo ruzivo rwokuzviwanira rwakanga rwuchiripo mukati make nesimba rakazara. Nechinangwa chehurukuro yedu, tichafunga nezvaLevy seamygdala akakuvadzwa asina simba retsitsi, akadzidza kunzwisisa nekuchenjera uye nechando (pasina manzwiro) kuti zviito zvakadaro kana zvimwe zvinokuvadza vanhu, uye kukanganwirwa kunofanira kutsvakwa kuvanyaradza. . Totiwo kukumbira ruregerero kwakaoma kwaari sezvakangoita munhu anonzwa, zvikasadaro zvinogona kupokana kuti chiito chakadaro hachifanirwe kukosheswa kana akasabhadharisa pfungwa kubva kune anozviita.
 Ona izvi zvakadzama mubhuku regumi nerimwe muTalmudic Logic Series, Iyo Platonic Character yeTalmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay naUri Shield, London 2014, muchikamu chechipiri.
 Maimonides mumidzi yawo inotaura kuti mitzvot mbiri isingavandudze chimwe chinhu chinopfuura mitzvah yemumwe munyoreri haifanirwe kugadzwa.
 Uye hazvina kufanana nemurairo wekuda kukura maari. Ona matauriro edu ipapo.
 Nyangwe iyi iri mirairo inobva mumashoko evanyori, uye zviri pachena kuti murairo Dauriyta ndihongu pamanzwiro, asi uyo anoita zviito izvi nerudo rwake kune umwe wake anozadzisawo mune iyi mitzvah Dauriyta. Asi hapana chipingamupinyi kumutauro waMaimonides pano kunzwisisa kuti kunyange Dauriyta mitzvah iyo inobata zvomenemene noukama hwokurumbidza inogona kuva yendangariro uye kwete yemirangariro sezvatatsanangura pano.
 Sezvandakatsanangura ipapo, musiyano uyu une hukama neAristotelian musiyano pakati pechinhu uye nyaya kana nyaya uye chimiro, uye muuzivi hwaKant kune musiyano pakati pechinhu chacho pachacho (iyo nuumana) kutaura sezvainoratidzika kumaziso edu ( the chiitiko).
 Ona ipapo mienzaniso yandakapa kubva kunyanzvi yemunyori weArgentina Borges, "Ochber, Telen, Artius", mumadutu akadudzirwa naYoram Bronowski.
 Ndaratidza ipapo kuti humbowo hunogona kutorwa kubva munharo yeontology yekuvepo kwaMwari. Kana kuvapo kwechinhu chiri hunhu hwake, nokuti ipapo kuvapo kwaMwari kunogona kubvumikiswa kubva mumurangariro wake, izvo zvisingabviri. Kunyangwe ona kukurukurwa kwakadzama kweiyi nharo mune yekutanga notebook pane saiti. Ikoko ndakaedza kuratidza kuti nharo yacho haisi isina maturo (kunyange kana isingadikanwi).
Fungidziro dzinotevera kubva kwemushakabvu R. Binyamin David Levy (chikamu 124)
Darush, Mhiripiri, Rudo rwaIsraeri neKunaka Kwayo (Koramu 52)
Nziyo Dzenyika Yandaida: Kutarisa Kwenyika Yekumusha (Koramu 153)
16 Pfungwa pa “PaRudo: Pakati Pemanzwire Nepfungwa (Koramu 22)”
30 Tishrei 10 - 2016/12/11 na XNUMX:XNUMX
Ko 'rudo rwepfungwa' runorevei, mushure mezvose rudo manzwiro?
Kana kuti uku kukanganisa here uye zvinonyatso kureva chirevo uye kubatana kune imwe - uye mu 'mupfungwa' chinangwa hachisi chekunzwisisa kwekuongorora asi kuti intuition ndicho chinhu chakakodzera kuita?
Uye kana iri mufananidzo werudo, hazvireve kuti rudo rwune manzwiro, asi chinangwa chemufananidzo ndechekuti munhu 'haagone' haagare achikanganisa .. Pamwe inyaya yekuti iyi intuition 'inokunda' munhu wese Anopenya here…
Kupokana kwangu ndekwekuti handizvo. Manzwiro ndiwo anonyanya kuratidza rudo kwete rudo pacharwo. Rudo pacharwo isarudzo yehungwaru, kunze kwekuti kana manzwiro akasimuka saka ini pamwe ndasarudza.
Ini handisi kuona zvazvinoreva kuva analytical. Ichi chisarudzo icho ichi ndicho chinhu chakarurama chokuita, seizvo Maimonides akanyora mundima yechipiri.
Kana mufananidzo ukasauya kuzojekesa basa rangu, zvine basa rei? Anondiudza chii chichaitika kwandiri iye pachake? Pamwe aiuya kuzotsanangura zvandaifanira kuita.
30 Tishrei 10 - 2016/12/13 na XNUMX:XNUMX
Sezviri pachena pane musiyano pakati pe'basa rinobva murudo' umo rabhi aibata nechinzvimbo, uye 'mitzvot ahavat ha' (umo Maimonides anobata nemitemo yaYeshuat)….
MuHalachot Teshuvah Maimonides inobata nezvinounza Edheni kuti inamate zita - uye zvechokwadi mazwi arabhi anogutsa ...
Asi nesimba rekuve mitzvah, mitzvah yerudo rwaGd haishande nezvinounza munhu kushanda, asi ine basa paari kuti akure (semazwi aHagli Tal - mufaro unovandudza hafu yebasa)… Kucherechedza kusikwa
Kubvumirana zvachose. Uhu zvirokwazvo hukama pakati pemitemo yakakosha yeTorah neTeshuvah. Uye zvakadaro muna H. Teshuvah anozivisa rudo nekuita chokwadi nekuti ichokwadi. Chii chiri pakati pazvo nemanzwiro? Kunenge kuti rudo runopinzwana nzvimbo dzose dziri mbiri rudo rumwe chete. MuBasic Torah anonyora kuti rudo runowanikwa nekucherechedza kusikwa (iyi ndiyo fungidziro yandanga ndichitaura nezvayo), uye muTeshuvah anotsanangura kuti zvazvinoreva munhau yekushanda kubva murudo kuita chokwadi nekuti ichokwadi. . Uye ndiwo mashoko angu.
Pfungwa yekutya zvechokwadi yakasiyana pakati peYeshiva neHalachot Teshuvah
Aya ndiwo mafungiro anoshamisa. Kana tichitaura nezvekushanda kuita mari uye kutaura nezvekutenga chimwe chinhu nemari, izwi rekuti "mari" rinoonekwa nenzira dzakasiyana here? Saka sei paunonzwa rudo kana kuti paunoita chimwe chinhu nerudo, shoko rokuti "rudo" rinoonekwa nenzira mbiri dzakasiyana?
Nezvekutya, ukama huri pakati pekutya kukwidziridzwa uye kutya kwechirango hunofanirawo kukurukurwa. Kana pfungwa imwe chete ikashandiswa inofanira kuva nechirevo chimwe chete, kana kuti zvishoma nekubatana kwakakwana pakati pezvinoreva. Muzviitiko zviviri izvi kutya kwakafanana, uye musiyano uri pamubvunzo wekuti chii chinomutsa kutya, kurangwa kana kukwidziridzwa.
Dudziro muHalacha C inonzwika kuva diki kwandiri.
Zvakaoma kubvisa chidimbu chechiitiko kubva pamashoko aMaimonides uye kuti anongonyevera nezve "kubviswa kweTorah." Zvamazvirokwazvo kunoratidzika kuva kunorondedzera chinoitika chakakomba chomudi Mwari kuti chinhu bedzi chiri munyika chinomunetsa rudo rwaMwari. Ini handibvumirani zvachose nefungidziro yechinyorwa chekuti chiitiko chemumoyo chinoisa mudiwa pakati uye rudo rwakasiyana chete runoisa mudiwa pakati. Zvinoratidzika kwandiri kuti pane nhanho pamusoro pekuparadzaniswa kunotonhora uye ndipo apo kuda kwemudiwa kunobatanidza nechido chemudiwa uye kuzadzikiswa kwekuda kwemudiwa kunova kuzadzikiswa kwekuda kwemudiwa uye zvinopesana. mu "ita kuda kwenyu sezvaanoda". Murudo urwu, hazvibviri kutaura nezvemudiwa kana mudiwa pakati asi nezvechishuwo chimwe chete kune vese. Sokuona kwangu, Maimonides anotaura pamusoro paikoku apo anotaura nezvechishuvo chomudi waMwari. Hachipesani nokuitwa kwechokwadi nokuti ichokwadi chinogona kubva muchishuvo chechokwadi.
1. Kwandiri hazviratidzike zvakaoma. Ndakatsinhira pamusoro pemabatirwo akarurama emifananidzo.
2. Kufungidzira munyaya yacho hakusi kuti ruzivo rwemanzwiro runoisa mudiwa pakati, asi kuti kazhinji inewo chimiro chakadaro (chinobatanidzwa).
Nyaya yemubatanidzwa uyu isinganzwisisike yakandiomera uye handifungi kuti inoshanda, kunyanya kwete kuchinhu chisingabatike uye chisingabatike saMwari, sezvandanyora.
4. Kunyange kana zvisingapesani nokuitwa kwechokwadi nokuti ichokwadi, asi hazvina kudaro kwaari. Maimonides anozivisa ikoku norudo.
30 Tishrei 10 - 2016/12/14 na XNUMX:XNUMX
Semazuva ese, zvinonakidza uye zvinokurudzira kufunga.
Panguva imwe cheteyo, revo muna Maimonides haisati ichingova zvayo ‘kunetseka zvishoma’, uye kwete kunyange kukurumidza kukuru, inongova zvayo kumonyaniswa (mukukanganwira). Maimonides akaita unani hwake kurondedzera chimiro chendangariro, uye unomumanikidza kutaura kuti ichiri chimwe chinhu chine mufungo uye chinotsausa (sezvaunochirondedzera) [uye tsinhiro pamusoro po‘kukundikana’ mukuwirirana nemienzaniso haisati ichipwisa here munhau yedu. chirevo chechinyorwa, nekuti pano hakusi kungofuratira mifananidzo asi kufuratira ].
Kana uri mubvunzo wakazara pamusoro pezvakakosha zvekunzwa, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti manzwiro ese mugumisiro weimwe pfungwa yekuziva. Kutya nyoka kunobva mukuziva kwedu kuti ine njodzi. Mwana mudiki haatyi kutamba nenyoka.
Naizvozvo hazvina kururama kutaura kuti manzwiro anongovawo zvawo. Chimiro chendangariro chinoitwa semhedzisiro yeimwe maonero. Naizvozvo munhu asina kukuvadzwa uropi, uye pasina manzwiro anomuka maari zvichitevera kukuvadzwa kwake kune mumwe munhu, zvinobuda kuti maonero ake ehunhu haana kukwana.
Sokuona kwangu, iyi ivavariro yaMaimonideswo. Sezvo kuziva kwomunhu chokwadi kunokura, kunzwa kworudo mumwoyo make kunokurawo. Zvinoita kwandiri sekuti zvinhu zvakajeka gare gare muchitsauko (Halacha XNUMX):
Chinhu chinozikanwa uye chakajeka kuti rudo rwaMwari haruna kusungwa mumwoyo wemunhu - kusvika agara arwuita zvakanaka uye achisiya zvese zviri munyika kunze kwake, sezvaakaraira akati 'nemoyo wako wese uye nemweya wako wese. ' - asi nemafungiro aiziva. Uye maererano nemafungiro, pachava nerudo, kana zvishoma uye kana zvakawanda. "
Nyora pano: a. Rudo manzwiro akasunga mumwoyo wemunhu.
B. Murairo uri muTorah unotaura nezvemanzwiro.
chetatu. Sezvo manzwiro aya ari mugumisiro wepfungwa,
Zvinoreva murairo wekuda Mwari kuwanda mundangariro dzaMwari.
Handina kuona mumashoko aMaimonides pano kuti manzwiro. Kuziva asi kwete hako manzwiro. Iwewo unofuratira hukama pakati peB naC hwandakamiririra mukutaura kwangu.
Asi kunze kwezvose izvi, handina dambudziko mumusimboti nemashoko ako, nekuti kunyangwe mumitoo yako basa rakasara patiri ibasa rekuziva, kuziva nekuziva, uye kwete manzwiro. Manzwiro kana akasikwa semugumisiro - achasikwa, uye kana zvisingaiti - saka kwete. Nokudaro manzwiro anomuka pakupedzisira pasina simba redu. Ruzivo nekudzidza zviri mumaoko edu, uye manzwiro ndiwo mhedzisiro. Saka ndeupi musiyano uripo pakati pezvaunopa nezvandanyora?
A CPM yemunhu ane uropi hwakakuvadzwa uye asingakwanisi kuda. Munofunga kuti munhu akadaro haagoni kuchengeta murayiro worudo rwaMwari here? Sekuona kwangu hongu.
Chekupedzisira, kana watotora mashoko halakhah iri kutaurwa paRambam, sei waikanganisa? Heino mutauro uzere:
Zvinozikanwa uye zviripachena kuti rudo rwaMufaro haruna kusungwa mumwoyo wemunhu kusvika agara arwuita nemazvo achisiya zvose zviri panyika kunze kwarwo, sezvaakaraira akati nemoyo wese nemweya wako wese. haadi Zvishoma uye zvakawanda, saka munhu anofanira pamwe chete kunzwisisa uye kudzidziswa muuchenjeri nenjere zvinomuzivisa nezvecono yake sesimba iro munhu anofanira kunzwisisa uye kuwana sezvataona mumitemo inokosha yeTorah.
Zvakajeka kwatiri kuti iyi ipfungwa uye kwete manzwiro. Uye kunyanya manzwiro chibereko chepfungwa. Basa rekuda Mwari harisi pamanzwiro asi papfungwa. Uye NPM yehuropi-yakakuvadzwa.
Uye zvinogoneka sei kusapera nemashoko aRabhi mukuzadzisa ikoko:
Chinhu chinozivikanwa uye chakajeka, nezvimwe. AA ihwo hupenzi hwataisaziva kuti sei chiri chinhu chegwara, uye tinoturikira muzvinhu zviviri mutauro wenhetembo sehupenzi kuna David, uye imwe nyaya yerudo rwake ichabudirira muzvinhu zvako zvausingazobhadhara. teerera kwavari
So far saka zvakanaka manheru ano.
1. Mukuona kwangu mutsara wokuti 'kusungwa mumwoyo womunhu' unonyanya kukodzera manzwiro pane kuziva.
2. Hukama huri pakati paB naC ndehwechikonzero nemhedzisiro. Ndiko kuti: pfungwa dzinotungamirira kurudo. Rudo runounza basa kuzita rarwo (harusi rudo asi 'basa rinobva murudo', kureva: basa rinobva murudo).
Seder mumashoko aMaimonides ane chekuita nemusoro wenyaya - nyaya yake haisi murairo werudo rwaMwari (iyi ndiyo nyaya munheyo dzeTorah) asi ibasa raMwari, uye paanouya kuzotsanangura basa rakanakisa. anotsanangura chimiro chayo (zita rayo - II) uye kwakabva), Uye gare gare anotsanangura nzira yekusvika nayo rudo urwu (Da'at - HV).
Ikoku kunotsanangurwa mumashoko aMaimonides pamugumo waHalacha XNUMX : “Uye nepo achida Mwari, iye achaita pakarepo mirairo yose norudo. Zvino muHalacha C inotsanangura kuti rudo rwakafanira chii.
3. Musiyano uripo pakati pemashoko edu wakakura kwazvo. Mune maonero angu, kuchengetwa kwe mitzvah kune manzwiro, ndiko kuti: manzwiro anonyanya kukosha uye kwete chimwe chigadzirwa chemukati uye chisingadikanwi. Uyo anocherechedza 'rudo rwaMwari' rwaPlato uye rwakaparadzaniswa haachengeti mitzvah. Kana akakuvara mu amygdala anongobatwa chibharo.
4. Handina kunzwisisa izvo mashoko akataurwa mukupfuuridzirwa kwomutauro waMaimonides akawedzera
(Mashoko okuti “haadi Iye Akaropafadzwa [asi mumaonero…]” haawaniki mushanduro yeFrenkel, saka handina kuatora, asi zvaanoreva zvakafanana. Rudo ”semashoko epatani, asi iro zvaingove zvekujekesa, uye pano zvakare zvinoreva zvakafanana)
1. Zvakanaka. Handina chokwadi nazvo.2. Ndinobvumirana nezvose izvi. Uye zvakadaro ita chokwadi nokuti ichokwadi hachiratidziki kwandiri kuti chine chokuita nemanzwiro erudo asi kune chisarudzo chekuziva (zvichida manzwiro erudo anofambidzana nawo, kunyange zvisingaiti. Ona chinyorwa changu chekare).
3. Saka ndinoramba ndichibvunza kuti sei kutibatanidza kune chimwe chinhu chinomuka chega? Kunyanya mitzvah ndeyekudzamisa ruzivo nebasa renjere, uye rudo rwunongomuka mushure maizvozvo (akaropafadzwa mutendi) kazhinji chiratidzo chekuti wazviita. Saka uyo ane pfungwa dzakakuvadzwa haabatwe chibharo, asi anoteerera zvizere mitzvah. Isu hatina chiratidzo cheizvi, asi Mwari anoziva uye ndiye akanakisa.
4. Mashoko anobva mukupfuuridzirwa kwomutauro waMaimonides anotaura nezvechiratidzo pakati porudo nokuziva, kana kuti zvikurukuru rudo muuyo wokuziva.
Zvinoita sekuti tanyatsojekesa zvigaro zvedu.
Nezvemubvunzo wako unodzokororwa: zvinhu zviri nyore.
Mwari anotirayira kuti tinzwe. Ehe!
Asi ndeipi nzira yekuzviita? Kuwedzera maonero.
Chimiro chenyanzvi: kucherechedzwa kwe mitzvah - emotion, chiito che mitzvah - kuwanda kwemafungiro.
(Mazwi aRabbi Solovitchik maererano nemamwe mitzvos ane mukurumbira: munamato,
Asi upindure, kuti kuchengeta mitzvah kuri mumoyo).
Kana iwe uchida kubvuma kugona kwayo kwekufungidzira 'kutarisira nezvemanzwiro
Zvedu uye kwete kubva pazviito zvedu nemaonero chete, saka zvinhu zvinonzwisisika uye hazvisi kunetsa.
Zvino manzwiro haasi anongodiwa 'ne-chigadzirwa', asi muviri wemitzvah.
(Uye ane hukama pano mazwi ane mukurumbira aRab'a pamusoro pekusachiva.
Ikoko anoshandisa musimboti wakafanana: Kana kuziva kwako kwakatwasuka,
Chero zvazvingava, kunzwa kwekuchiva hakuzomuki)
Iwe uri kutaura chokwadi kuti munhu anoita maererano nenjere uye kwete maererano nemanzwiro anongova munhu akasununguka, somuenzaniso, rudo rwaMwari nderwepfungwa uye kwete manzwiro, asi zvichiita sezvinogona kutaurwa kuti semunhu. anodzivirira mafeelings ake akasungwa kwavari uye kwete munhu akasununguka saka munhu anoita zvinoenderana neA mind yakasungwa nefungwa dzayo kwete yakasununguka, unototaurawo nezverudo kuti emotional supreme love is emotional nekuti ndizvo. njere dzinotendeukira kune imwe kwete kuti utsigire manzwiro (iwe pachako) asi njere idzi dzinozvitsigira iwe uri mutsauko sei mukuzvifungira pakati pezviitiko zviviri izvi?
Ndinokuyeuchidza kuti patakangotaura iwe wakanakidzwa nekukurukurirana uye iwe wakandiudza kuti iwe unofanirwa kunyora nezve nyaya yekuti munhu chete anorarama hupenyu hwake maererano neHalacha munhu ane njere, uye nezve kusarudzika kweTalmud neHalacha kutora pfungwa dzisinganzwisisiki. uye wozvigadzirisa kuti uzviite.
Zvinogona kutaurwa kuti pfungwa nemanzwiro mabasa maviri akasiyana ane chinzvimbo chakaenzana. Asi muchisarudzo chepfungwa kuda kunobatanidzwa nepo manzwiro ari masikirwo anomanikidzwa pandiri. Ndakawedzera izvi mumabhuku angu eRusununguko Sainzi. ndatenda nechiyeuchidzo. Zvichida ndichanyora chinyorwa pamusoro payo panzvimbo.
Ndinofunga zvichakufadza http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
Kune dzimwe nhaurirano dzakawanda dzakadai, uye zhinji dzadzo dzose dzinotambura nekusajeka kwepfungwa (usatsanangure manzwiro nepfungwa. Zvakadaro, hazvinei nemashoko angu nekuti anotaura nezvekushanda kwehuropi uye ini ndinotaura nezvekufunga. Kufunga kunoitwa mukati pfungwa uye kwete uropi.Haafungi nekuti haasarudze kuita saizvozvo uye haa“zvifungi.” Neuroscience inotora kuti basa rehuropi = kufunga, uye izvi ndizvo zvandakanyora kuti maererano neizvi zvakare mvura inoyerera inopinda mukufunga. chiitiko.
26 Sivan 06 - 2019/20/42 paXNUMX:XNUMX
Muchikamu chinotevera chechinyorwa chinopomerwa, T.S. Ndicharatidza mumabhuraketi akaenzana:
“Kureva kuti mufaro nemafaro hazvibvisi kukosha kwechiito chero bedzi zvakanamirwa pachiri semugumisiro wepadivi. Asi kana munhu akadzidzira mafaro uye mufaro, i.e. izvo zvinokurudzira pakudzidza kwake, iko kudzidza zvechokwadi kwete nekuda kwayo. Apa vaive vakarurama "vakashata." Muchirevo chedu chemashoko zvinonzi kukanganisa kwavo hakusi kuti vaifunga kuti chidzidzo chacho hachifanirwe kuitwa necentrifugal [= centrifugal cell]. Mukupesana, ivo vakarurama chose chose. Chikanganiso chavo ndechekuti kuvapo chaiko kwemafaro nerufaro kunoratidza mumaonero avo kuti ichi chiito checentrifugal [= centrifugal cell]. Hazvidi hazvo. Dzimwe nguva mafaro nerufaro manzwiro anouya chete semugumisiro wekudzidza uye asingaumbe zvikonzero nazvo.
2. "Kupokana" mumitemo miviri yakatarisana muRambam maererano nerudo, kunoratidzika kunge kwakagadziriswa semashoko edova rinopenya rawakazviunzira iwe pave paya ndokutsanangura muTotoD. Izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naMaimonides pano nezvorudo rwaMwari. Hune chikonzero chepfungwa, uye mhedzisiro yemanzwiro. Anotsanangurawo rudo rwaanotaura nezvarwo muMitemo Yekutanga yeTorah P.B. Kuona kusikwa nokuzivikanwa kwouchenjeri hwaMwari uye kunaka kwake. Icho chokwadi-kuziva / chikonzero chepfungwa - chinoburitsa [zvakare] mhedzisiro yemanzwiro. Uye ndizvo chaizvo zvaakataura pano zvakare.
26 Sivan 06 - 2019/20/57 paXNUMX:XNUMX
1. Chokwadi chaizvo. Ndakagadzirisa.
2. Apa handibvumirani nazvo. Hakuratidzike kunge kune musiyano wakadaro pakati pema halachah maviri maererano naMahal Teshuvah.
'Rudo rwemahara' - pane chikamu chechinhu uye kwete pachikamu chemazita ayo
16th yeTammuz 07 - 2020/17/39 naXNUMX:XNUMX
Tichitarisa mutsauko unotsanangurwa pano pakati perudo rwepfupa uye rudo kune chikamu chemazita - zvinokwanisika kunzwisisa pfungwa ye'rudo rwemahara' yakagadzirwa naRabbi Kook.
Pane imwe mamiriro ezvinhu apo hunhu hwemunhu kana hutungamiriri hunotyisa zvekuti hapana hunhu hwakanaka hunogona kunzwika hungamutsa kunzwa kwechisikigo kwerudo kwaari.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, panogona chete kuva ne'rudo papfupa', rudo kumunhu chete nekuda kwekuve 'mudiwa wemunhu akasikwa muB'Tselem' kana 'mudiwa weIsrael anonzi vakomana kunzvimbo', avo kunyange mubasa repasi re'vakomana vane uori' vachiri 'kunzi vakomana', Vazhinji 'tsitsi dzababa' dziripo kuvanakomana vake.
Zvisinei, zvinofanira kucherechedzwa kuti rudo rwababa kuvana vavo kunyange mumugariro wavo wakashata zvikuru harusati ruchingova bedzi ‘rudo rwapachena’. Inokurudzirwawo netarisiro yekuti zvakanaka zvinovanzwa muvakomana nechisimba - zvichabudawo. Kutenda kwakasimba kwababa muvana vavo uye kwoMusiki muvanhu vavo—kungaratidzira pesvedzero yarwo yakanaka, uye naizvozvo ‘uye vakadzorera mwoyo yamadzibaba kuvanakomana ‘kungadzosawo mwoyo yavanakomana kumadzibaba avo.
Zvakakosha kucherechedza pano tsananguro yakavandudzwa yakatsanangurwa naBat-Galim Sha'ar (amai vaGil-ad XNUMX) kune pfungwa ye'rudo rwemahara'. Maererano naye, 'rudo rwemahara' ndirwo 'rudo rwavo rwenyasha'. Kuwana iyo yakanaka pfungwa mune vamwe - inogona kumutsa rudo rwakapera uye kufema hupenyu muhukama.
Uye zvechokwadi zvinhu zvine hukama nemazwi aRabbi Nachman weBreslav muTorah Rafev pa 'Singing kuna Elki ini', kana ndichifara mune 'zvishoma zvishoma', mudiki diki rezvakanaka, kana zvakanyanya. chinoramba chiri mumunhu - uye 'chiedza chidiki - chinodzinga rima rakawanda'.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 pa 17:XNUMX
Rabhi achandijekesera kuti ndeupi musiyano uripo pakati perudo rwepfungwa uye ruchiva ini handigoni kuzvinzwa.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 pa 42:XNUMX
Mubvunzo wacho handina kuunzwisisa. Musiyano uripo pakati pemanzwiro maviri aya hauna hukama nemashoko angu. Munhu wose anobvuma kuti hazvina kufanana. Aya manzwiro maviri akasiyana. Ruchiva chido chekutora chimwe chinhu, kuva wangu. Rudo manzwiro ane pakati peumwe uye kwete ini (centrifugal uye kwete centrifugal). Ini pano ndakasiyanisa pakati pemanzwiro uye maonero (rudo rwepfungwa uye rwepfungwa).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 pa 37:XNUMX
"Asi kana rudo rwuri mugumisiro wekutonga kwepfungwa uye kwete manzwiro chete, saka pane nzvimbo yekurayira."
Asi zvakadaro, ndingadzidziswa sei kuti ndinzwisise chimwe chinhu ??? Kana mukanditsanangurira ini ndisati ndanzwisisa kana kusabvumirana haisi mhosva yangu!
Zvakafanana nekubatana kune mumwe munhu anogara muzana remakore rechi10 kuti anzwisise heliocentric modhi, kana achinzwisisa utano asi kana asiri zvokuita!
Kunze kwekunge wati mitzvah kuti unzwisise Mwari zvinoreva kuti ndoda kuedza kunzwisisa uye kana usina kunzwisisa kwete kutyisa unobatwa chibharo.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 pa 43:XNUMX
Vashandi vanofanira kuongorora nyaya yacho kusvikira manzwisisa. Fungidziro ndeyokuti ukanzwisisa chinhu chacho uchachida. Kana ukasabudirira unobatwa chibharo.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 pa 43:XNUMX
Uye mumwe mubvunzo: iwe unochengeta sei uye uchida muvakidzani wako sezvaunozviita kana iri rudo rwepfungwa, chii chiripo kunzwisisa pano?
Zvinoreva kuva hama yako kubva kuIsraeri zvinofanira kunzwisiswa. Kunzwisisa kuti vanhu imhando yemhuri (mumhuri zvinongoitika).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 pa 51:XNUMX
Kureva kushanda kwechinhu chiri pamberi pacho kutaura nezvemapfupa acho here? Somuenzaniso, kutaura kuti tafura “chimwe chinhu chinobvumira kuti zvinhu zviiswe pairi” chinhu chayo kana kuti mapfupa ayo?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 pa 44:XNUMX
Ndinofunga kuti chinhu. Pamwe ichi zvakare chikamu chepfungwa yemadhesiki zvakazara. Asi maererano netafura chaiyo pamberi pangu ichi chimiro chayo.